Fampiharana fahazoan-dàlana amin'ny famoahana Arizona MMJ | Orinasa rongony any AZ
Fampiharana dispensary ao Arizona
Fangatahana lisansa fametrahana marijuana Arizona
Fangatahana ho an'ny orinasa Marijuana Navoakan'ny Departemantan'ny Serivisy ho an'ny Fahasalamana any Arizona. Ny fampiharana dia kely dia kely. Pejy vitsivitsy monja izy ireo, fa ny fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana dia mahatonga azy tsy ho azon'ny rehetra afa-tsy ny manankarena. Ity no takiana:
Fanambarana ara-bola 500,000 XNUMX $
Affidavit of zoning
Affidavit an'ny fananan-tany
fanekena avy amin'ny tompon'andraikitra ambony sy mpikambana ao amin'ny birao
Te-hahazo fahazoan-dàlana handoa vola any Arizona amin'ny 2021
Efa ho andro fifidianana ho an'ny Arizonianina! Latsaky ny iray volana miala ny fifidianana amin'ny lalàna Smart sy Safe Arizona, tokony handinika ny hanombohanao ny drafitra hidiranao amin'ny orinasa rongony fialam-boly ao Arizona ianao.
Taorian'ny fandraisana andraikitra Smart sy Safe Arizona dia ny ara-dalàna ny Marijuana fialamboly ara-barotra ara-barotra any Arizona dia nanangona sonia 420,000, saika indroa ny isa takiana hanaovana balota, ny tranga dia i Arizona dia manatevin-daharana ny fanjakana 12 any Etazonia mba hamela ny olon-dehibe hampiasa ny ornabis orinasa.
Ity no mila fantatrao momba ny fandraisana andraikitra raha ianao no iray amin'ireo liana amin'ny fanokafana ny dispensary marijuana amin'ny asa noerena ho lasa tsena multimillionaire any Arizona.
Ny lalàna Smart sy Safe Safe dia manara-dalàna ny fampiasana rongony ho an'ny olon-dehibe 21 taona na mihoatra noho izany, mamela ny fananana mariage ho 1 metatra tsy misy mihoatra ny 5 grama ny marijuana.
Ambonin'izany, mamela zavamaniry enina ao amin'ny toerana iray mihidy ary tsy misy fijerin'ny besinimaro ao an-trano, tsy misy zavamaniry 12 mahery any an-trano misy olon-dehibe 2.
Ity fananganana ara-dalàna ity dia midika koa fa ny famokarana marijuana, ny fanjifana ary ny fanaparitahana azy dia iharan'ny fitsipi-dalàna, ny hetra ary ny lalàna eo an-toerana.
Ny Departemantan'ny serivisy ho an'ny fahasalamana, izay mifehy ny programa marijuana ara-pahasalamana ao amin'ny fanjakana dia voatendry ho fahefana mpanara-maso hitantana sy hanara-maso ny fampiasana olon-dehibe marijuana toeram-pananganana sy fotodrafitrasa, na eo aza ny atin'ity lalàna ity.
Henoy ny PodCast anay Vaovao ara-dalàna cannabis na Jereo ny lohatenin'ny YouTube mitondra ny lohateny Mpisolovava rongony Arizona raha misy fampahalalana mifandraika.
FIVAVAHANA MISY: Ahoana ny fomba hanokafana dispensary cannabis any Arizona
FIVAVAHANA MISY: Mpisolovava rongony Arizona
Te-hanangana marijuana any Arizona ianao?
Initiative ao amin'ny Arizona Marijuana
Misy teboka manan-danja tokony hodinihina rehefa mangataka fahazoan-dàlana rongony iray any Arizona:
Ahoana ny fomba famoahana ireo fahazoan-dàlana famindrana ao AZ?
Ny Fahefana Ara-dalàna dia hamoaka fahazoan-dàlana mari-pamantarana marobe roa isaky ny distrika raha toa ka tsy misy ny mari-pahaizana momba ny mari-pamokarana rongony tsy mitady tombony, raha toa ka misy ny tsy fahazoan-dàlana mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana an-tsokosoko, dia hivoaka izany.
Ny famoahana ny fahazoan-dàlana dia tokony atao amin'ny alàlan'ny fisafidianana voafetra araka ny fitsipiky ny departemanta. Farafahakeliny 60 andro alohan'ny fifidianana dia tokony hatao ampahibemaso ao amin'ny tranokalan'ny ofisialy izany sy ny fomba fitsinjarana hafa mba hahatratrarana ireo antoko liana.
Ny fahazoan-dàlana dia hanan-kery mandritra ny roa taona. Aorian'ny farany dia tsy maintsy manavao ny fahazoan-dàlana ireo mpangataka ary handoa ny saram-panavaozana.
Inona no atao hoe Application Aterineto tany AZ Marijuana?
Ny mpangataka iray tany am-boalohany dia ny orinasam-panjakana mikasa ny hampandeha mari-pahaizana marijuana any amin'ny distrika iray izay tsy nahazo alàlana ny roa-polo natokana ho an'ny mari-pahaizana miady amin'ny mari-pahaizana an-tsokosoko.
Hankatoavina ny fiandohan'ny alahady faha-19 Janoary 2021 ka hatramin'ny 9 martsa 2021, tsy mihoatra ny 60 andro aorian'ny fahazoana ny fangatahana ny departemanta dia tsy maintsy mamoaka fahazoan-dàlana mari-pahaizana marijuana ho an'ireo fangatahana voalohany.
Inona ny fahazoan-dàlana Dual any Arizona?
Ny Dual Lisansa dia voafaritra ho toy ny orinasa iray izay mitazona ny tsy fahazoan-dàlana ho an'ny mpitsabo rongony tsy mitady tombony ary ny fahazoan-dàlana hametrahana marijuana. Midika izany fa navela hisoratra anarana ho "mpangataka aloha" amin'ny fahazoan-dàlana ny Establishment Dispensaries.
Inona avy ireo karazana lisansa marijuana hita ao AZ?
Ny lalàna Smart sy Safe Arizona hafa noho ny fitsipiky ny fanjakana hafa, momba ny fahazoan-dàlana alàlana momba ny marijuana amin'ny lafiny maro, ohatra, dia mametraka karazana lisansa roa misy ihany izy:
Ny fahazoan-dàlana Marijuana, izay manome alàlana hananana toeram-pivarotana tokana, fivarotana toerana iray tsy hiasa, hamolavola ary hamokarana ary toerana iray tokana hanamboarana sy fonosana rongony, ny roa farany dia tsy nahazo alàlana hivarotra rongony na mariage. fanamboarana na fambolena toerana. Ny departemanta momba ny fahasalamana dia tsy hamoaka fahazoan-dàlana mihoatra ny iray amin'ny mari-pana isaky ny folo
Ny fahazoan-dàlana mari-pahaizana momba ny marijuana dia manome alàlana ny famakafakana sy ny fanaraha-maso ny haben'ny vokatra sy ny fitsirihana ny zava-mahadomelina manimba amin'ny rongony. Tsy voafetra ho an'ny orinasam-panjakana tsy miankina, ny departemanta misahana ny fahasalamana dia afaka miasa toy ny fitiliana ihany koa.
Ahoana ny amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny tranokala?
Tsy toa ny fanjakana toa an'i Illinois sy Alaska, ity lalàna ity dia tsy misaintsaina ny fahazoan-dàlana amin'ny fividianana eny an-toerana. Ary koa, satria miady hevitra momba ny lohahevitra tsy voadinika ao amin'ny lalàna isika, ny fanaterana mariage dia takatra ho toy ny fitaterana rongony amin'ny mpanjifa any amin'ny toerana hafa ankoatry ny toerana fivarotana voatondro, dia raisina ho tsy manara-dalàna, mandra-pitantanana ny departemanta misahana ny fahasalamana. dia tarihiny handray am-pitsipika amin'ny fanaterana trano amin'ny taona 2025.
Inona no fitsipika tsy maintsy arahiko rehefa manana ny lisansao aho?
Mba hampandehanana ny fananganana marijuana, dia tokony harahina ny fitsipi-dàlana. Raha tsy izany dia mety ho 1,000 XNUMX dolara ny fandikan-dalàna tsirairay
Ny fiarovana tsara amin'ny fananganana sy trano;
Ny fiarovana tsara ny fambolena, fanodinana ary ny famokarana nataon'ny orinasa; ary
Fanaraha-maso, fitiliana, fametahana mari-pahaizana ary fonosana rongony ao anatin'ny fitsipika napetraka ao amin'ny lalàna.
Ahoana ny momba ny hetra?
Inona no zavatra hafa tokony ho fantatro momba ny fandraisana andraikitra Smart sy Safe Arizona?
Ny fandraisana andraikitra Smart sy Safe Arizona dia mamaritra ny fanitsakitsahana ny olon-dehibe mihoatra ny 21 ony mahery nefa 1 grama nefa latsaky ny 2.5 grama ny meloka noho ny helony kely ary ny zaza tsy ampy taona iray dia voasazy onitra $ 100 amin'ny trosa voalohany sy ny fanoloran-kevitra momba ny zava-mahadomelina.
Ny hetsika dia mazava fa tsy mamela ny fampiasana rongony amin'ny toerana be olona toy ny valan-javaboary na trano fisakafoanana ary tsy mamela ny mitondra fiara, na manidina na amin'ny sambo raha toa ka tsy mahavita na dia kely aza amin'ny alàlan'ny rongony.
Ary tsy manakana ny zon'ny mpampiasa hitaky toeram-piasana tsy misy zava-mahadomelina na hampihatra ny politika mamepetra ny fampiasana rongony ho an'ny mpiasa na mpangataka asa.